Wotwaa wɔn abosonsom so aba (1-14)
Woduaa mframa, na wotwaa ahum (7)
Israel werɛ fii ne Yɛfo (14)
8 “Fa abɛn tua w’ano!+ Obi bɛba Yehowa fi so te sɛ ɔkɔre,+ Efisɛ wɔabu m’apam so,+ na wɔato me mmara.+ 2 Wosu frɛ me sɛ, ‘O yɛn Nyankopɔn, yɛn Israelfo de, yenim wo!’+ 3 Israel atow papa akyene.+ Enti ma ɔtamfo ntiw no. 4 Wɔasisi ahemfo, nanso me nsa nnim. Wɔasisi abirɛmpɔn, nanso mannye antom. Wɔde wɔn dwetɛ ne wɔn sika kɔkɔɔ ayeyɛ ahoni.+Ɛno nti, wɔbɛsɛe wɔn.+ 5 O Samaria, wɔatow wo nantwi ba akyene.+ M’abufuw adɛw wɔn so.+ Enti morentumi nyɛ adepa da?* 6 Eyi fi Israel. Samaria nantwi ba no, ɛnyɛ Onyankopɔn. Ɛyɛ biribi a odwumfo ayɛ.Wobebubu nantwi ba no pasapasa. 7 Wɔredua mframa,Na wobetwa ahum.+ Hwiit* dua biara nni hɔ a aba a anyin* wɔ so;+Nea afifi biara nni hɔ a wobenya esiam afi mu. Sɛ wonya bi mpo a, ahɔho* na ebedi ne nyinaa.+ 8 Wɔbɛmene Israel.+ Wɔbɛyɛ sɛ kuku bi a obiara mpɛ+Wɔ amanaman no mu. 9 Wɔaforo kɔ Asiria+ te sɛ sare so afurum a ɔno nko ara atew ne ho. Efraim abɔ adɔfo paa.+ 10 Wɔbɔ wɔn paa fi amanaman no mu de,Nanso afei mɛboaboa wɔn ano;Na ahemfo ne abirɛmpɔn adesoa a wɔde bɛto wɔn so nti, wobefi ase ahu amane.+ 11 Efraim ama afɔremuka adɔɔso, na ama wayɛ bɔne.+ Ɔde afɔremuka no yɛɛ bɔne.+ 12 Mekyerɛw me mmara nsɛm* pii maa no,Nanso obuu ne nyinaa adehunu bi.+ 13 Wɔde akyɛde* bɔ afɔre ma me, na wɔwe nam no.Nanso Yehowa ani nnye ho.+ Enti ɔbɛkae wɔn amumɔyɛ, na watwe wɔn aso wɔn bɔne ho.+ Wɔadan wɔn ho kɔ* Egypt.+ 14 Israel werɛ afi ne Yɛfo,+ na wasisi adan ama abosom,+Na Yuda ama ne nkurow a wɔabɔ ho ban adɔɔso.+ Nanso mɛsoma ogya akɔ ne nkurow no mu,Na aban atenten a ɛwɔ nkurow no mu no, ɛbɛhyew ne nyinaa.”+
^ Anaa “morentumi mmɔ bra pa da?”
^ Anaa “abere.”
^ Anaa “ayɛyɛde.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔbɛsan wɔn akyi akɔ.”